Ngaba igranola isempilweni? Yonke into ekufuneka uyazi Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Eyaziwa ngokuba ngumanyano oluqinileyo kunye no-Asaí, igranola ikwangumbali ophambili wokusebenzela impilo. Inezakha-mzimba ezahlukeneyo kunye neevithamini ekubunjweni kwayo, kuxhomekeke kwinto eyongezwe kwiresiphi yakho.
Uninzi lweendlela zokupheka zingumthombo wee-carbohydrate ezilula nezintsonkothileyo, eziyimfuneko kwimisebenzi esisiseko yomzimba. Singatsho ke ukuba ugranola usempilweni?
Ingxaki ivela xa abavelisi bokutya bongeza izinto ezingezizo kunye neetoni zeswekile kwesi simuncu kwiimeko ezininzi, ngokwaneleyo ukukhuphisana nedessert.
1 Ngaba igranola iphilile? Qonda
2 Ibandakanya ntoni igranola?
3 Ngaba Ndiyakunciphisa Ukutya Ukutya iGranola?
Ngaba igranola iphilile? Qonda
Nangona kungekho mthetho ubhontsi wokwenza uguqulelo olugqibeleleyo, ezinye izinto zinqweneleka kwaye ezinye azizenzi igranola isempilweni.
Ingcebiso yokuqala yile: thintela ukongeza iswekile, ngakumbi iswekile esulungekisiweyo, engenasondlo kakhulu kwaye yongeza kuphela iikhalori "ezingenanto". Xa uswiti, khetha ubusi, i-molasses ye-cane, isiraphu ye-agave kunye neswekile emdaka okanye i-demerara, engaphantsi kweenkqubo zokucokisa. Kwaye, ewe, ihlala ikwixabiso eliphakathi, ukongeza nje incasa engakumbi, kulungile?
Ibandakanya ntoni igranola?
Ke, ii-whims kumxube we-cereal, sisiseko segranola: i-oats, i-corn flakes engenasweets, irhasi, intsholongwane yengqolowa, irayisi yimizekelo.
Kwakhona kubandakanya iziqhamo ezomileyo ezifana ne-apricot, i-blueberry, ibhanana, i-apula kunye nekakhukhunathi. Yonke iyimithombo elungileyo yefayibha kwaye "ityebisile" isiseko sevithamini yegranola.
Imbewu yeoyile kufuneka nayo ibe yinxalenye yegranola, njengoko ibonelela ngamafutha alungileyo, anje nge-omegas. IiWalnuts, iinuts zaseBrazil, ii-cashews, i-chia, ii-almonds, i-macadamia lukhetho olugcwele iipropathi. Kufuneka ujonge isixa, kuba zihlala zi-caloric ngenxa yamafutha.
Ukulawula ubungakanani besabelo, sebenzisa ikomityi yokulinganisa okanye uhlengahlengise ukugxila kwakho kwaye ucinge ngegranola njenge-topping ye-yoghurt yamaGrike endaweni yesitya sonke sakusasa okanye emva kwemini.
Ngaba Ndiyakunciphisa Ukutya Ukutya iGranola?
Lo ngomnye umcimbi, kuba abantu abaninzi abafumana indlela yokuphila esempilweni badla igranola. Nangona kunjalo, akukho zifundo zingqina ukusebenza kokulahleka kobunzima.
Kodwa ngokuqinisekileyo yeyona ndlela isempilweni ngakumbi kunelekese ngaphandle kweeyure zomsebenzi, kuba inika ukwaneliseka, into ebalulekileyo kwabo bafuna ukunciphisa umzimba.